Grenada inotarisira kuve dive capital yeEast Caribbean
Location: musha » Kutumira » Newsletter » Grenada inotarisira kuve dive capital yeEast Caribbean
ST. GEORGE'S, Grenada (eTN) - Hurumende itsva yeGrenada yati ichange ichitarisa zvakanyanya kune dive, mitambo uye eco-tourism misika yeindastiri yekushanya nekuti tarisiro yehupfumi yechitsuwa mune ramangwana inoonekwa ichakanganiswa zvakanyanya nebudiriro. muchikamu chekushanya.
"Chitarisiko chedu munguva yepakati chingave chekumisa Grenada seguta guru rekunyura kuEast Caribbean, uye kuisa Grenada senzvimbo inofarirwa yekufamba nechikepe," akadaro Gavhuna General Sir Daniel Williams paakapa hurukuro yechinyakare pakuvhurwa kwechikepe. Musangano weparamende wechisere neChipiri.
Mukuru wehurumende yeGrenada akazivisawo kuti hurumende ichagadzira chiremera chekushanyirwa chine chinangwa chekutevera zvido zvebhizinesi nezvinangwa zvechikamu uye kutaurirana nevatambi vakakosha mukutengeserana. "Gadziriro dzakaparadzana dzichaitwa dzekuvandudzwa kwechigadzirwa, masevhisi evatengi uye mamwe masevhisi anoenderana," Sir Daniel vakadaro mukero yavo yemaminetsi makumi mana neshanu, iyo yakaburitswa neterevhizheni neredhiyo.
Vachitsanangura zvakare nezvehurongwa hwehurumende itsva, yakasarudzwa muna Chikunguru 8, Sir Daniel vakati mikana ichapihwa kune mabhizinesi matsva nemadiki kuunza mumusika chigadzirwa chitsva chekushanya kunyanya munzvimbo dzemitambo uye eco-tourism.
"Zvinangwa zvedu ndezvekuwana mari yakawanda kubva mukushanyirwa uye kuwana mamwe mabasa kune vanhu vedu," akadaro, achitsanangura kuti hurongwa hwakakwana huchaiswa mubazi rehurumende mukuvandudza mitemo nekutonga.
Achiziva makakatanwa aripo pakati pechisikigo uye nharaunda yakavakirwa, Williams akati mutemo wehurumende itsva uchave kuchengetedza kwezvakatipoteredza. “Pamamiriro ezvinhu aya, Hurumende yangu ichaita kuti pave nekuenzana pakati pemasango edu nezviwanikwa zvemumvura uye mari huru yekusimudzira upfumi hwedu,” vakadaro.
Hazvisi zvese zvinonakidza, chikafu uye mapenzi 'kutenderedza pane ngarava dzezvikepe
Isiri-Diki Cell Lung Cancer: New Preclinical Data